Imaski yokukhusela ye-Kn95, imaski ekhuselayo eyi-N95, imaski yezonyango enokulahlwa - uFeliks
I-Kn95 yintsika esemgangathweni yaseTshayina. Isixhobo sokuphefumla se-Kn95 luhlobo lokuphefumla oluyimpumelelo yokufayilisha kwamachaphaza kwilizwe lethu. Imaski ye-Kn95 kunye ne-N95 imaski ngokuqinisekileyo ziyafana ngokuhambelana nokusebenza kokucoceka kwezinto.
Imaski elahliweyo yenziwa ngaphezulu kweengcamba ezintathu zelaphu elingena-28g; impumlo yenziwa ngobuhlobo kokusingqongileyo yonke intambo yplastiki, engenayo nayiphi na intsimbi, enomxokelelwane wokuphefumla (iimaski zonyango) zinokuthintela usuleleko lomgudu wokuphefumla ukuya kuthi ga kwinqanaba elithile, kwaye alunakuthintela ukuqaqamba.
Inkampani yethu yasungulwa ngo-2005, ngumsebenzi ovelisa iR & D kunye nothengiso lweNcwadi, amanqaku eStick, ifolda yeSanitizer, isikhumba sePU, izinto zePPE njl. Sikwisixeko saseShenzhen esinokuhamba ngokulula. Ukuza kuthi ga ngoku, Sineqela labantu elingaphaya kwama-300 kunye namashumi eminyaka amava orhwebo lwangaphandle, iimveliso zethu zithunyelwa ngaphandle eYurophu, eMzantsi Melika, e-Australia, e-Afrika nase-Asiya.
Nokuba yeyiphi na imveliso, siya kuqala ukusuka kuthengwe izinto ezingasetyenziswayo, kwimveliso yemveliso, ukuya kuthi ga kwimpahla ethunyelwa kuyo, ukuya kuthi ga kumabala esiko, inyathelo ngalinye lilawulwa ngokuqinileyo ziingcali, ukuqinisekisa ukuba iimpahla zikwimeko elungileyo kwaye ziya kufika abathengi ngexesha.
Ulwazi ngezifo zokuzikhusela
Ulwazi ngezifo zokukhusela ubhubhane esele zinayo okanye kungekudala ziya kusebenza, ekuqhambukeni kwangoku kufuneka kwenziwe? 1. Ungayinxiba njani ngokufanelekileyo imaski elahliweyo xa usiya emsebenzini.Zama ukungathathi izithuthi zikawonkewonke, kuyacetyiswa ukuhamba, ibhayisekile okanye ukuthatha imoto yabucala, ibhasi egxothiweyo ukuya emsebenzini.Ukuba uya ...
Ukoyisa lo kuthintelo loobhubhane kwaye ulawule imfazwe, eyona nto iphambili “kukuthintela”
Ukoyisa lo kuthintelo loobhubhane kwaye ulawule imfazwe, eyona nto iphambili “kukuthintela”. I-WHO ibhengeze inoveli ye-coronavirus pneumonia bhubhani njenge "bhubhane". Iimaski ezincinci ziye zatsala amawaka ezigidi kwihlabathi liphela. Emva kwemaski encinci ngumxokelelwane wokuvelisa kunye nokwenza kunye ...
Umnikezeli womgangatho we-mask slider wase China